PHOTOSHOP မှာစတုဂံဆွဲရန်ကဘယ်လို - PHOTOSHOP ကို - 2019
CSV ဖိုင် (comma-separated တန်ဖိုးများ) ဖိုင် tabular data တွေအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသောစာသားပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကော်လံကော်မာသို့မဟုတ် semicolon အားဖြင့်ကွဲကွာနေကြသည်။ ကျနော်တို့ကဒီပုံစံကိုဖွင့်လှစ်နိုင်သလဲဆိုတာ applications များအားဖြင့်သင်ယူကြသည်။
အထွေထွေစည်းမျဉ်းနှင့်အမျှမှန်ကန်စွာ CSV ကို tabular ပရိုဆက်ဆာများ၏ content ကြည့်ရှုရန်အသုံးပြုကြသည်, ထိုသူတို့သုံးနိုငျတည်းဖြတ်, နှင့်စာသားအယ်ဒီတာများရန်။ ရဲ့ဖိုင်တွေကိုဒီအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးအစီအစဉ်များကိုဖွင့်ပွဲမှာလုပ်ရပ်များ၏ sequence ကိုတစ်ဦးပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်ကြရအောင်။
Method ကို 1: Microsoft က Excel ကို
Microsoft က Office ကိုအထုပ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့်ပေါ်ပြူလာစကားလုံး processing ပရိုဂရမ် Excel, အတွက် CSV ကို run ဖို့ဘယ်လိုစဉ်းစားပါ။
Excel ကိုစတင်ပါ။ အဆိုပါ tab ကိုသွားပြီး "File".
ဒီ tab ကိုမှဖွင့်, စာနယ်ဇင်း "ပွင့်လင်း".
အဲဒီအစားဤလုပ်ရပ်များကိုတိုက်ရိုက်စာရွက်ဖြစ်လျက်ရှိအပေါ်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည် ကို Ctrl + အို.
ပြတင်းပေါက်လည်းမရှိ "တစ်ဦးစာရွက်စာတမ်းဖွင့်လှစ်"။ ကနှင့်အတူရှိရာ posted CSV ကိုပြောင်းရွှေ့။ တနျဖိုးကို formats များ၏စာရင်းထဲကနေရွေးချယ်ဖို့သေချာပါစေ "စာသားဖိုင်တွေ" သို့မဟုတ် "အားလုံးဖိုင်များ"။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်လိုအပ်သောပုံစံရိုးရှင်းစွာဖော်ပြပေးခြင်းမရှိပါ။ ထို့နောက်အရာဝတ္ထုနှင့်စာနယ်ဇင်းအထိမ်းအမှတ် "ပွင့်လင်း"ဒါကစေမည် "စာသား Wizard ကို".
အကူးအပြောင်းအတွက်တဦးတည်းကပိုနည်းလမ်းရှိပါတယ် "စာသား Wizard ကို".
အပိုင်းရွှေ့ရန် "ဒေတာများ"။ အရာဝတ္ထုပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ "စာသား မှစ. "အဆိုပါလုပ်ကွက်ထဲတွင်နေရာ "ပြင်ပမှာ Data Get".
tool တစ်ခုပေါ်လာသည် "သွင်းကုန်စာသားဖိုင်မှတ်တမ်း"။ ကိုယ့်ကိုပြတင်းပေါက်၌တူသော "တစ်ဦးစာရွက်စာတမ်းဖွင့်လှစ်"ထိုအခါသင်ကအရာဝတ္ထု၏တည်နေရာကိုသွားနှင့်သူကမှတ်ချင်တယ်။ ပုံစံကိုရွေးချယ်ပါစာသားဆံ့ကြောင်းတ္ထုအဘို့ဤ tool ကိုအသုံးပြုခြင်းပြသပါလိမ့်မည်ကတည်းကမလိုအပ်ပါဘူး။ klikayte "သွင်းကုန်".
စတင် "စာသား Wizard ကို"။ မိမိအ window ၏ပထမဦးဆုံးခုနှစ်တွင် "ဟုအဆိုပါဒေတာကို format နဲ့ Specify" အနေအထားသို့ရေဒီယိုထား "Delimiter"။ ထိုဒေသတွင် "File Format" option ကိုရပ်သင့်ပါတယ် "ယူနီကုဒ် (UTF-8)"။ စာနယ်ဇင်းများ "Next ကို".
ယခုတွင်သင်သည်ဒေတာ display ကို၏မှန်ကန်မှုမူတည်ပါလိမ့်မယ်အရာအားဖြင့်အလွန်အရေးကြီးသောခြေလှမ်း, လုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ (;) သို့မဟုတ်ကော်မာ (,) semicolon: တစ်အနားသတ်မျဉ်းစဉ်းစားသည်အတိအကျဘာကိုသတ်မှတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အမှန်မှာဤကိစ်စတှငျကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများရှိကွဲပြားခြားနားသောစံချိန်စံညွှန်းများရှိပါသည်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ semicolon - ဒီတော့ပိုပြီးမကြာခဏအသုံးပြုသည်ကော်မာအင်္ဂလိပ်စာသားများအဘို့နှင့်ရုရှားဘာသာစကားသည်။ ကွဲပြားခြားနားပြောင်းပြန်အသုံးပြုသောအခါခြွင်းချက်ရှိပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, အလွန်ရှားပါးသောရောဂါဖြစ်ပွားမှုအတွက်ထိုကဲ့သို့သောထူ ထပ်. လိုင်း (~) ကဲ့သို့သောအခြားနိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုသီးခြားအဖြစ်အသုံးပြုကြသည်။
ဒါကြောင့်အသုံးပြုသူဆုံးဖြတ်ရန်ရမည်ဖြစ်သည်ကိုဤအမှု၌, တစ်ဦးအထူးသဖြင့်အကျင့်စာရိတ္တသို့မဟုတ် separator ဘုံပုဒ်ဖြတ်ဟုတ်မဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ကိုသူထဲမှာဖော်ပြပါတယ်သောစာသားကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်လုပျနိုငျ "ဒေတာများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနမူနာ" နှင့်ယုတ္တိဗေဒအပေါ်အခြေခံပါတယ်။
ဒါကြောင့်အုပ်စုအတွက်အနားသတ်မျဉ်းဇာတ်ကောင်သည်အဘယ်အရာအသုံးပြုသူအဆုံးအဖြတ်ပြီးနောက် "Delimiter ဇာတ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်" အမှတ်အနားမှာ box ကိုစစ်ဆေးသင့် "ဆီမီးကော်လန်" သို့မဟုတ် "ကော်မာ"။ ပစ္စည်းများအပေါငျးတို့သညျအခွားစစ်ဆေးမှုများသေတ္တာများနှင့်အတူဖယ်ရှားရမည်။ ထို့နောက်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ "Next ကို".
ထို့နောက်ပြတင်းပေါက်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ကော်လံကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်ရသောဖွင့်လှစ် "ဒေတာများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနမူနာ"သင့်အနေဖြင့်သတင်းအချက်အလက် display ကိုယူနစ်များ၏မှန်ကန်မှုတစ်ခု format ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည် "ကော်လံမှာ Data Format ကို" အောက်ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များအကြားရေဒီယိုခလုတ် switching by:
ဘယ်မှာတင်သွင်းအချက်အလက်များ၏တစ်စာရွက်ပေါ်၌နေရာတောင်းတဲ့ပြတင်းပေါက်ရှိပါသည်။ ရေဒီယိုခလုတ် switching by သစ်တစ်ခုသို့မဟုတ်တည်ဆဲစာရင်းထဲမှာပါစေနိုင်ပါတယ်။ အဆုံးစွန်သောအမှု၌သင်တို့လည်းသက်ဆိုင်ရာလယ်ပြင်၌ရှိသောတည်နေရာအတိအကျကိုသြဒီနိတ်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်သူတို့ကိုရိုက်ထည့်ဖို့မက data တွေကိုထည့်သွင်းပါလိမ့်မည်ရှိရာခင်းကျင်း၏အထက်ပိုင်း-လက်ဝဲဒြပ်စင်ဖြစ်လတံ့သော, ဒီလယ်ပြင်၌ရှိသော cursor ထား, အဲဒီနောက်သင်ထောက်ကူပေါ်မှဆဲလ်အရွေးဖို့လုံလောက်ပါတယ်။ ကိုသြဒီနိတ်စာနယ်ဇင်း setting ပြီးနောက် "အိုကေ".
အဆိုပါ Excel ကိုစာရွက်ပေါ်တွင်ပြသထားတဲ့အရာဝတ္ထုရဲ့ contents ။
သင်ခန်းစာကိုဘယ်လို Excel ကိုတစ်ဦး CSV ကို run ဖို့
Method ကို 2: LibreOffice Calc
Calc, ပရိသ LibreOffice အတွက်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု - CSV ကိုအခြား spreadsheet ကို run နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။
LibreOffice စတင်ရန်။ ရိုက်သံ "ပွင့်လင်းဖိုင်မှတ်တမ်း" သို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်းကို ကို Ctrl + အို.
သငျသညျကိုလညျးကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့် menu ကတဆင့်တစ်ဦးအကူးအပြောင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် "File" နှင့် "ပွင့်လင်း ... ".
ထို့အပြင် window ၏အဖွင့်ကို interface ကယ်လိုရီမှတဆင့်တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, LibreOffice Calc အတွက်ဖိုလ်ဒါသို့မဟုတ်အမျိုးအစားထဲမှာ icon ကိုကလစ်နှိပ်ပါ ကို Ctrl + အို.
နောက်ထပ်ဂျဟာတဖြည်းဖြည်းအသွင်ကူးပြောင်းမှတ်ပေး "File" နှင့် "ပွင့်လင်း ... ".
အဲဒီ options အမျိုးမျိုးကိုမဆို၏အသုံးပြုမှုကိုပြတင်းပေါက်၏အသွင်အပြင်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ် "ပွင့်လင်း"။ နေရာတစ်နေရာ CSV ဖိုင်တည်နေရာက Move, ကရွေးပြီးကလစ်နှိပ်ပါ "ပွင့်လင်း".
သင်တို့မူကား, Window ကို run ခြင်းမရှိဘဲတောင်မှလုပျနိုငျ "ပွင့်လင်း"။ ဒီလိုလုပ်ဖို့၏ CSV ကိုဆွဲယူ "Explorer ကို" LibreOfis ၌တည်၏။
tool တစ်ခုပေါ်လာသည် "သွင်းကုန်စာသားကို"တစ်ဦး analogue ဘယ်ဟာဖြစ်ပါသည် "စာသား Wizard ကို" Excel ကိုပါ။ အားသာချက်ဤကိစ္စတွင်အားလုံးကိုလိုအပ်သော parameters တွေကိုတူညီတဲ့ပြတင်းပေါက်၌ရှိကြ၏ကတည်းက, ကွဲပြားခြားနားသောပြတင်းပေါက်များအကြားသွားလာတင်သွင်းချိန်ညှိရန်မလိုပါကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
ထိုခဏခြင်းတွင်အုပ်စုတစ်စု setting ကိုသွားပါ "သွင်းကုန်"။ ထိုဒေသတွင် "Encoding" တန်ဖိုးကိုရွေးချယ်ပါ "ယူနီကုဒ် (UTF-8)"ဒါဟာမဟုတ်ရင်ပုံပေါ်လျှင်။ ထိုဒေသတွင် "ဘာသာစကား" စာသား၏ဘာသာစကားကို select လုပ်ပါ။ ထိုဒေသတွင် "တွင်လိုင်း" သင်လိုင်းများအကြောင်းအရာတင်သွင်းစတင်သင့်တယ်ဘယ်လိုအတိအကျသတ်မှတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အများဆုံးကိစ္စများတွင်, ဒီ parameter သည်အပြောင်းအလဲများကိုလိုအပ်သောဖြစ်ကြသည်။
ထို့နောက်အုပ်စုကိုသွား "Delimiter န့်သတ်ချက်များ"။ ပထမဦးစွာသင်တစ်ဦးအနေအထားအတွက်ရေဒီယိုကိုထည့်သွင်းဖို့လိုအပ် "ခြား"။ semicolon တစ်ခုသို့မဟုတ်ကော်မာ: ထို့ပြင် Excel ကိုသုံးပြီးတဲ့အခါမှာထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့တူညီမူအရအပေါ်, သင်ကသီးခြားအဖြစ်ဆောင်ရွက်လိမ့်မည်အကြောင်း, တစ်ဦးအခြို့သောအချက်များ၏ရှေ့မှောက်၌ box ကိုစစ်ဆေးနေခြင်းဖြင့်ညွှန်ပြရန်လိုအပ်သည်။
"အခြား Settings" ကို ကျနော်တို့မပြောင်းလဲထားခဲ့ပါ။
က window ၏အနိမ့်စိတျအပိုငျး၌သင်တို့ကိုသူတို့အားသို့မဟုတ်အခြား setting များကိုပြောင်းလဲပစ်သောအခါကဖြစ်နိုင်အရေးကြီးတဲ့အချက်အလက်တွေတစ်ခုအတွက်မည်သို့ pre-ကြည့်ပါ။ အားလုံးလိုအပ်သောသတ်မှတ်ချက်ဘောင်ဝင်ရောက်ပြီးနောက်စာနယ်ဇင်း "အိုကေ".
အကြောင်းအရာကို interface LibreOfis Calculator ကိုကနေတဆင့်ပြသ။
Method ကို 3: OpenOffice Calc
OpenOffice Calc - ကြည့်ရန် CSV ကိုအခြားစားပွဲ processor ကိုသုံးနိုင်သည်။
OupenOfis စတင်ပါ။ အဓိက window ထဲတွင်စာနယ်ဇင်း "ပွင့်လင်း ... " သို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်းကို ကို Ctrl + အို.
သင်တို့သည်လည်းမီနူးကိုသုံးနိုင်သည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, ထိုအချက်များအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "File" နှင့် "ပွင့်လင်း ... ".
ယခင်အစီအစဉ်၏နည်းလမ်းကဲ့သို့ပင်ပြတင်းပေါက်အရာဝတ္ထု၏အဖွင့်ဖို့ရရန် Calculator ကို interface ကိုမှတဆင့်တိုက်ရိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သင်ပုံရိပ်ဖိုင်တွဲထဲမှာ icon ကို click ပါသို့မဟုတ်အားလုံးကိုတူညီတဲ့လျှောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ် ကို Ctrl + အို.
သငျသညျကိုလည်းရာထူးပေါ်မှာနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်မီနူးကိုသုံးနိုင်သည် "File" နှင့် "ပွင့်လင်း ... ".
ပေါ်လာသော window ၏ဖွင့်ပွဲမှာပစ္စည်းနှင့်စာနယ်ဇင်းကိုမီးမောင်းထိုးပြ, CSV ကိုနေရာချထားရန်လမ်းညွှန် "ပွင့်လင်း".
သင်ရိုးရှင်းစွာဆွဲခြင်းနှင့် CSV ဖိုင်ထဲကနေကျဆင်းနေခြင်းဖြင့်ဒီဝင်းဒိုးကိုစတင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲလုပျနိုငျ "Explorer ကို" OupenOfis ၌တည်၏။
ဖော်ပြထားလုပ်ရပ်များအမျိုးမျိုးမဆိုအဆိုပါ activation ပြတင်းပေါက်များဖြစ်ပေါ်လာစေမည် "သွင်းကုန်စာသားကို", LibreOffice အတွက်အမည်တူနှင့်အတူ tool ကိုမှအလွန်ဆင်တူနှင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာနှင့် function ထဲမှာတည်သည်ဘယ်။ ထို့ကြောင့် action ကိုအတိအကျတူညီထွက်ယူသွားတတ်၏။ လယ်ကွင်းထဲမှာ "Encoding" နှင့် "ဘာသာစကား" ကျရောက်စေ "ယူနီကုဒ် (UTF-8)" နှင့်အသီးသီးဟာလက်ရှိစာရွက်စာတမ်း၏ဘာသာစကား, ။
ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအတွက် "Parameter separator" အမှတ်အနားမှာရေဒီယိုခလုတ်ကိုထည့်ပါ "ခြား"ပြီးတော့ (ပစ္စည်းကိုချွတ်စစ်ဆေး"ဆီမီးကော်လန်" သို့မဟုတ် "ကော်မာ"), ဘယ်စာရွက်စာတမ်းအတွက် separator အမျိုးအစားနဲ့ကိုက်ညီ။
ဤအခြေလှမ်းများဖျော်ဖြေပြီးနောက်, preview ကို၏ပုံစံ၏အောက်ခြေတွင်ပြသထားသောအချက်အလက်များ, မှန်ကန်စွာစာနယ်ဇင်းပြသလျှင် "အိုကေ".
အဆိုပါဒေတာကိုအောင်မြင်စွာ interface ကို OupenOfis Calculator ကိုအပေါ်ပြသပါလိမ့်မည်။
Method ကို 4: Notepad
Notepad ကိုစတင်ပါ။ မီနူးထဲမှာ, ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "File" နှင့် "ပွင့်လင်း ... "။ သို့မဟုတ်သင်သုံးနိုငျ ကို Ctrl + အို.
အဆိုပါဖွင့်ပါ window ကို။ CSV ဖိုင်တွေ့ရှိချက်ဧရိယာထဲမှာသူ့ကိုသွားပါ။ Display ကိုကို formats ၏လယ်ပြင်တွင်, set "အားလုံးဖိုင်များ"။ လိုချင်သောအရာဝတ္တု mark ။ ထို့နောက်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ပွင့်လင်း".
အဆိုပါစက်ရုံကျနော်တို့စာရင်းဇယားများနှင့်စာသားထဲမှာလေ့လာတွေ့ရှိထားတဲ့စားပွဲတစ်ခုအတွက်ပွင့်လင်းဖြစ်ပေမယ့်သေချာပေါက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒီ format နဲ့အရာဝတ္ထုတည်းဖြတ်ရန်သို့သော်မှတ်စုစာအုပ်အတွက်အလွန်လွယ်ကူပါတယ်။ သင်ရုံချင်းစီအတန်းကို Notepad ထဲမှာစာသားတစ်လိုင်းနဲ့ကိုက်ညီလျက်, ကော်လံတစ်ကော်မာ-separated သို့မဟုတ် semicolon အားဖြင့်ကွဲကွာကြသည်အကောင့်သို့ယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဤအချက်အလက်ပေးသင်အလွယ်တကူမဆိုချိန်ညှိ, တန်းစီထည့်သွင်းဖယ်ရှားခြင်းသို့မဟုတ်ဘယ်မှာလိုအပ်သောနဂိုအတိုင်းဖြစ်အောင်ဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့်စာသားကိုတန်ဖိုးများရှိစေနိုင်သည်။
Method ကို 5: Notepad ++
အဆိုပါလုပ်နိုင်တဲ့ဖွင့်ပါနှင့်တစ်ဦးထက်ပိုအဆင့်မြင့်သောစာသားအယ်ဒီတာသုံးပြီး - Notepad ++ ။
Notepad ++ ပါ။ မီနူးပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ "File"။ ထို့နောက်ရှေးခယျြ "ပွင့်လင်း ... "။ သင်တို့သည်လည်းလျှောက်ထားနိုင်ပါသည် ကို Ctrl + အို.
နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာ folder တစ်ခုအဖြစ်အိုင်ကွန်ပေါ် panel ကိုနှိပ်ပါဝငျသညျ။
အဆိုပါဖွင့်ပါ window ကို။ ဒါဟာရှိရာတပ်မက်လိုချင်သောအ CSV ဖိုင်ဖိုင်စနစ်၏ဧရိယာသို့ပြောင်းရွေ့ရန်လိုအပ်ပေသည်။ မိမိအလွှတ်ပေးရန်စာနယ်ဇင်းပြီးနောက် "ပွင့်လင်း".
အကြောင်းအရာ Notepad ++ ထဲမှာဖော်ပြပါတယ်။ Edit အခြေခံမူကို Notepad သုံးပြီးတဲ့အခါမှာကဲ့သို့တူညီသောသော်လည်း, Notepad ++ data တွေကိုကြိုးကိုင်အဘို့များစွာသောပိုပြီး tools တွေကိုပေးထားပါတယ်။
Method ကို 6: Safari က
အဆိုပါ Safari က browser မှာဖြစ်နိုင်ခြေကိုတည်းဖြတ်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေမပါဘဲစာသားကိုပုံစံအတွက် contents တွေကိုကြည့်ရှုပါ။ ထိုကဲ့သို့သောဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုပေးမထားဘူးအခြားလူကြိုက်များ browser များအများစုဟာ။
Safari ကစတင်ရန်။ ရိုက်သံ "File"။ ထို့နောက်အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ပွင့်လင်းဖိုင်မှတ်တမ်း ... ".
အဆိုပါဖွင့်ပါ window ကို။ ဒါဟာ CSV ဖိုင်, သုံးစွဲသူကြည့်ရှုရန်အလိုရှိရာအရပ်မှလှုပ်ရှားမှုထုတ်လုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဒါဟာ box ထဲမှာကို formats ပြောင်းမဖြစ်မနေဖြစ်ပါသည်ဟုသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်သည် "အားလုံးဖိုင်များ"။ ထိုအခါတစ်ရွေးချယ်ရေးအရာဝတ္ထု extension ကို CSV ဖိုင်နှင့်စာနယ်ဇင်းအောင် "ပွင့်လင်း".
ဒါကြောင့် Notepad ထဲမှာခဲ့တဲ့အတိုင်းအရာဝတ္ထုရဲ့ contents, စာသားပုံစံအတွက်ဝင်းဒိုးအသစ် Safari ကဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။ သို့သျောလညျးကို Notepad နဲ့မတူပဲ, Safari အတွက် data တွေကို edit, ကံမကောင်းကြောင့်သာကြည့်ရှုနိုင်သမျှဖွစျလိမျ့မညျကတည်းကအလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ပေ။
Method ကို 7: Microsoft Outlook
တချို့က CSV ဖိုင်တ္ထုက e-mail ကို client ကို e-mail ကနေ export နေကြသည်။ သူတို့ကသွင်းကုန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအောင်, Microsoft Outlook နဲ့ program ကို အသုံးပြု. ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ပါသည်။
Autluk စတင်ပါ။ Program ကိုဖွင့်လှစ်ပြီးနောက်, tab ကိုသွားပါ "File"။ ထို့နောက်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ပွင့်လင်း" Sidebar မှာ။ next ကိုစာနယ်ဇင်း "သွင်းကုန်".
စတင် "သွင်းကုန်နှင့်ပို့ကုန် Wizard ကို"။ ပစ္စုပ္ပန်စာရင်းမှာတော့ကို select "အခြားပရိုဂရမ်သို့မဟုတ်ဖိုင်မှတင်သွင်း"။ စာနယ်ဇင်းများ "Next ကို".
လာမယ့် window ထဲတွင်တင်သွင်းဖို့အရာဝတ္ထုအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ပါ။ ကျွန်တော်တစ်ဦး CSV ကိုတင်သွင်းမယ့်နေတယ်ဆိုရင်, သင်အနေအထားကိုရွေးချယ်ရမည် "ကော်မာတန်ဖိုးများ (Windows) Separated"။ စာနယ်ဇင်းများ "Next ကို".
လာမယ့် window ထဲတွင်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ " ... Browse".
ဝင်းဒိုးကိုပုံပေါ် "ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်"။ ဒါဟာ CSV ပုံစံအတွက်စာတစ်စောင်လည်းမရှိရာအရပ်သို့သွားသင့်ပါတယ်။ မာကုပစ္စည်းနှင့်စာနယ်ဇင်း "အိုကေ".
သင့်အနေဖြင့်င်းဒိုးကိုပြန်သွား "သွင်းကုန်နှင့်ပို့ကုန် Wizard ကို"။ ၏လယ်ပြင်တွင်မှတ်သားနိုင်ပါတယ်အဖြစ် "သွင်းကုန်မှ File" ဒါဟာအရာဝတ္ထုများ၏ CSV ဖိုင်လိပ်စာတည်နေရာထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအတွက် "န့်သတ်ချက်များ" settings ကို default အနေနဲ့အဖြစ်ကျန်ရစ်စေနိုင်သည်။ စာနယ်ဇင်းများ "Next ကို".
ထို့နောက်သူကသင်တင်သွင်းမေးလ်နေရာလိုသည့်ရန်စာတိုက်ပုံးထဲမှာ folder ကိုသတိပြုသင့်ပါတယ်။
နောက်တစ်နေ့မျက်နှာပြင် program ကဖျော်ဖြေခံရဖို့လုပ်ဆောင်ချက်၏အမည်ကိုဖော်ပြရန်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်ရုံကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ပြီးပြီ".
ထို့နောက်တင်သွင်းအချက်အလက်များကိုကြည့်ရှုခြင်းငှါ, tab ကိုမှ navigate "ပေးပို့ခြင်းနှင့်လက်ခံခြင်း"။ အဆိုပါ interface ကို၏ဘေးထွက်ဧရိယာ၌အဘယ်မှာရှိတင်သွင်းမေးလ်ဖိုင်တွဲဖို့ scroll ။ ထို့နောက်အစီအစဉ်၏ဗဟိုအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု, ဒီဖိုလ်ဒါကို၌နေသောစာလုံးများ၏စာရင်းကိုပါ။ အလိုရှိသောစာကိုနှစ်ချက်ဘယ်ဖက် mouse ကိုခလုတ်အပေါ်ရုံကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
CSV ဖိုင်မှတင်သွင်းထားတဲ့အရာဝတ္ထု Autluk program ကိုဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည်။
ဒါဟာသို့သော်ဤနည်းလမ်းအားလုံးမဟုတ် CSV ပုံစံအရာဝတ္ထုကို run နိုင်မှတ်ချက်ချသည်, သူတို့ပဲအက္ခရာများ, အမည်ရလယ်ကွင်းင်တစ်ဦးအခြို့သောစံနဲ့ကိုက်ညီသောဖွဲ့စည်းပုံ: ဘာသာရပ်, စာသား, ပေးပို့သူလိပ်စာ, လက်ခံရရှိသူလိပ်စာ, နှင့်အခြားသူများ။
သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့တစ်ဦး CSV ဖိုင်အရာဝတ္ထုဖွင့်လှစ်ဖို့အစီအစဉ်များ၏အတော်လေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ စည်းကမ်းကြောင့်စာရင်းဇယားများတွင်ဖိုင်တွေရဲ့ contents ကြည့်ရှုရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ တည်းဖြတ်တဲ့စကားလုံး Processor ကိုအတွက်စာသားပုံစံလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ ထို့အပြင်ထိုကဲ့သို့သော e-mail, client များအဖြစ်အထူးပြုပရိုဂရမ်လည်ပတ်ရာတိကျတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံရှိခြင်းသီးခြား CSV ဖိုင်, ရှိပါတယ်။
ဗီဒီယို Watch: I hired people to photoshop me "hotter" (နိုဝင်ဘာလ 2019).